Omume na-adịghị mma nke nwere ike ịkwụsị di na nwunye | Bezzia
Omume ọjọọ ndị nwere ike ịkwụsị di na nwunye
Maria Jose Roldan | 05/04/2021 22:00 | Mmekọrịta
Di na nwunye nile di na nwunye mejuputara ma biri na oge, a na-ekepụta usoro agwa adịghị mma maka ọdịmma dị mma nke di na nwunye ahụ. Na mbụ, omume ndị a nwere ike ọ dịghị mkpa, agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na ka oge na-aga, njikọta nke ndị dị otu a nwere ike jiri nke nta nke nta kewaa.
Ọ bụrụ na akwụsịghị ụdị agwa a n’oge, ihe dị mkpa dị n’ime di na nwunye ahụ nwere ike imerụ ha ahụ dị ka ọ dị n'ihe banyere ịtụkwasị obi ma ọ bụ nkwanye ùgwù. Ka nke a ghara ime, ọ dị mkpa ịmata njirimara ndị a ma kwụsị ha. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ omume ọjọọ ndị nwere ike ime na mmekọrịta.
2 Ọnụnọ nke iwe
3 Na-alụ ọgụ n'ihu ọha
4 Enweghị okwu ire ụtọ
Ntụnyere na-akpọ asị mgbe niile, ị kwesịrị izere iji ha na-eme ihe mgbe niile. Onye obula nwere ihe ndi ozo na omume oma ya mere na odighi mkpa itule. Ọ bụghị ihe amamihe dị na ya ma iji ya tụnyere ezigbo ya.
Ọnụnọ nke iwe
N'ime di na nwunye ahụ enweghi ike iwe iwe ma ọ bụrụ na ọ dị, ọ dị mkpa ka gị na di na nwunye ahụ kwurịta okwu iji dozie nsogbu. Ọ baghị uru ịgbaghara onye nke ọzọ ma ọ bụrụ na o sighị ya n’obi. Iwe were lie ma edozighi ya, o nwere ike ibu ibu karịa oge na-ebute nnukwu nsogbu mmekọrịta.
Na-alụ ọgụ n'ihu ọha
Lụ ọgụ n'ihu ndị bịara abịa bụ otu n'ime àgwà ọjọọ ndị ahụ a na-aghaghị izere mgbe niile. Ekwesịrị idozi nsogbu dị iche iche na nzuzo ma ọ bụghị n'ihu ọha. Ọ bụ omume na-agbasawanye n'ọtụtụ ebe na di na nwunye taa.
Enweghị okwu ire ụtọ
Ọ bụ ihe zuru oke ma dị mma na n'afọ ndị mbụ nke mmekọrịta ahụ, mmadụ abụọ na-enweta otuto site n'aka di na nwunye ahụ. Onye ọ bụla nwere mmasị na onye ha hụrụ n'anya na-arara ụfọdụ okwu ọma nke ịhụnanya na ụfọdụ otuto. N'ụzọ dị mwute, ka oge na-aga, ekele ndị dị otú ahụ na-ebelata na ha abụọ nwere ike iche n ’oge ọ bụla na ha adịkwaghị mma n’anya di na nwunye ahụ.
Okwu nke ekworo n'etiti di na nwunye ahụ bụ okwu aghụghọ. Inwe ekworo n'oge ụfọdụ bụ ihe a ga-ahụta dị ka ihe nkịtị ọ bụghị ihe na-echegbu onwe ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ekworo gafere ma na-eduga na nnukwu nsogbu zuru oke, ọ nwere ike imebi mmekọrịta ahụ. Ekworo enwekwaghị ike ịbụ agwa ọjọọ n’etiti di na nwunye ahụ.
Na nkenke, ụdị àgwà ndị a adịghị mma maka di na nwunye ahụ. Ka oge na-aga, omume ndị dị otú ahụ pụrụ ibibi onye òtù ọlụlụ. Omume ga-adị mma dịka o kwere mee iji hụ na nkekọ dị n'etiti mmadụ abụọ a na-esikwu ike ma ịhụnanya na-enwe ụdị nsogbu ọ bụla. Ikwesiri ima otu esi echebara di na nwunye a ma dozie nsogbu nye nsogbu di iche iche nwere ike ibilite site na nsogbu di iche iche puru ibia n'ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Omume ọjọọ ndị nwere ike ịkwụsị di na nwunye
Tofu na kọlịflawa curry na osikapa
Esi icho mma ulo obibi na osisi